ပုံစံများအကြောင်း & လက်စွဲ
လှေစီစဉ် & နောက်ထပ်
ရွက်မှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည် 'n' တက်ခတ်
အဆိုပါပိုးဖြတ်ရေကြောင်းဆုချီးမြှင့်ဒီဇိုင်း & အဆောက်အဦး၏ဆုရှင် 1989
ရွက် '' ဎမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်’ တက်
ယောဟနျသရောင်ကဒီဇိုင်း, ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်းအတွက် Wight ၏ Cowes ကျွန်းတွင်အခြေစိုက်, ဤအလှေအဆောက်အဦးအတွက်တစ်ဦးတစ်သက်တာအပေါ်အခြေခံပြီးဒီဇိုင်းများကြိုးစားခဲ့နှင့်စမ်းသပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်း.
Sail'n'Oar အားဖြင့်ထောက်ပံ့အဆိုပါပုံစံများကိုတိကျစွာဆောက်သောသူသည်စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိန်နှင့်ကုန်ကျစရိတ်ကိုကယ်တင်ဖြတ်နေကြတယ်. သူတို့ကပဲအပျေါမှာသင့်ရဲ့လှေတည်ဆောက်ရန်မူဘောင်တက်အောင်နှင့်အတူကူညီပေးဖို့ကြသည်မဟုတ်, တကယ်တော့ကြောင်းအဘယ်သူအားမျှလိုအပ်ပါသည်. အဆိုပါဆောက်လုပ်ရေးဒီဇိုင်းကိုအဆောက်အဦးအချိန် minimize လုပ်ဖို့ဖန်တီးလိုက်ပါပြီ. ရေးဆွဲမှုအဆင့်မလိုပါ, ခက်ခဲဒေသများတဝိုက်တင်းပလိတ်များနှင့်စာရေးအောင်. ရိုးရှင်းစွာအထင်းပေါ်ပုံစံများနေရာ, ပတ်ပတ်လည်အထိမ်းအမှတ်နှင့်ထွက်ခုတ်ဖြတ်.
လွယ်ကူသော Build စီမံကိန်းများ – သင်က Build ရန်သည်ဂန္ထဝင်လှေစီမံကိန်းများကို၏ကျွန်ုပ်တို့၏ Range
သင့်ရဲ့သစ်သားအထိမ်းအမှတ်နှင့်ဖြတ်ဖို့ပုံစံများအသုံးပြုခြင်းကိုသင်ပုံစံမျိုးစုံသင်အလွယ်တကူကိုယ့်ကိုကိုယ်စီမံခန့်ခွဲလိမ့်မည်ဟုအထဲကဖြတ်ရှိသည်ဖို့ပေးဆောင်နေကြရတဲ့ကိရိယာအစုံလှေ purchasing ထက် ပို. ချွေတာဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျဖွယ်ရှိလည်းသစ်နှင့်အထပ်သား၏ကုန်ကျစရိတ်အပေါ်အများကြီးကယ်တင်မည်.
ပထမဦးဆုံးကို manual Download, သင်နိုင်ပါတယ်ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပြီးနောက်ပုံစံများကိုဝယ်ယူ. ပုံစံများရှင်းပြီနေကြတယ်, နဲ့လုံလုံခြုံခြုံပြွန်ထဲမှာထုပ်ပိုး. သူတို့ကသင့်ရဲ့အိမ်သို့မဟုတ်အလုပ်ရုံမှဆက်သားကနေတဆင့်စေလွှတ်နေကြတယ်.
ရွက် '' ဎ’ တက်ခတ် FLATTIE SKIFF – အသေးစိတ်များအတွက်ဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ
Wight ၏ကျွန်း, PO32 6BE
ဖုန်းနံပါတ်: +44 (0)1983297310
E-mail ကို: info@sailဎoar.cအဆိုပါ.uk
Contact Form - ဤနေရာကိုကလစ်နှိပ်ပါ
Copyright © 2015 ရွက်ဎတက်ခတ် | Classic Small Boat Plans | ကွတ်ကီး | မြေပုံအညွှန်း | Site by IOW Geek